काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा बैंकहरूका सबै शाखा कार्यालयहरूले सहुलियत कर्जा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै वाणिज्य बैंकको एउटा शाखाले कम्तीमा १...
काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहमा १ सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निर्माणाधिन व्यापारिक करिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा विकास गर्न र स्थानीय...
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोसी र निजी क्षेत्रबाट समेत गरी कुल...
काठमाडौं : कोरोना संकटका कारण खर्च कटौती गरेको सरकारले कर्मचारीमाथि पनि लक्षित गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण अभियानमा जटेका बाहेक सबै कर्मचारीको भत्ता खारेज गरिदिएको छ। माघदेखि नेपालमा फैलिएको कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटका कारण स्रोत...
काठमाडौं : सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको जानकारी दिए। खतिवडाका अनुसार भैरहवाको गौतम ब...
काठमाडौं : सरकारले भ्रमण भत्ता, इन्धन, फर्निचर, नयाँ सवारी खरिदमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसको जानकारी दिएका हुन्। खर्च मितव्ययी बनाउन कार्यबोझ र कार्यप्रकृति हेरी अनावश्यक सार्वजनिक निकाय खारेज गरिने पनि उनले घोषणा गरेका छ...
काठमाडौं : सरकारले आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारले विदेशीलाई अनलाइनबाटै आवश्यक काम गर्ने प्रबन्ध मिलाउने पनि जनाएको छ। त्यस्तै चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी र कोरोना रोकथामका लागि खटिनेका लागि सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने अर्थमन्त्र...
काठमाडौं : नागढुंगा र सिद्धबाबाको पहिरो भएको खण्डमा सुरुङ मार्ग अघि बढाइने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुङ मार्ग विकास गर्नका लागि ६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला सदरम...
काठमाडौं : सरकारले रेलमार्गका लागि ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, २५० पुल निर्माण गर्न, ३ सय भन्दा बढी निर्माणाधीन पुल सम्‍पन्न गर्न र १३०० स्थानीय पुल निर्माण गर्न १० अर्ब विनियोजन गरेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ला...
काठमाडौं : मध्यपहाडी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढाएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र गरिसक्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले जानकारी दिए। बिहीबा...
काठमाडौं : चर्को विवादमा परेको अमेरिकी परियोजना एमसिसी संसदबाट पास हुनै बाँकी छ। तर सरकारले एमसिसीमार्फत सञ्‍चालन हुने आयोजनालाई पनि बजेट विनियोजना गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एमसिसी अन्तर्गतको परियोजनालाई बजे...
काठमाडौं : युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि सरकारले २ अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। बिहीबार संघीय संसदका दुवै बैठकमा संयुक्तरूपमा बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ...
काठमाडौं : काठमाडौंमा खानेपानी ल्याउन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने सरकारले जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै मेलम्चीको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण सकेर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमा नै...
काठमाडौं : कोरोना महामारीका कारण नराम्ररी थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले कर्जा प्रवाहसँगै ब्याजमा सहुलियत दिने भएको छ। 'हवाई सेवा, होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण सहितका सेवा क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि कर्जा तथा ब्याजमा सुविधा दि...
काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरसको संकटसँग जुध्दै आगामी आर्थिक वर्षमा ६ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशमा ६ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको बताएका छन्। उनले त्यतिका संख्यामा...
काठमाडौं : सरकारले भक्तपुरबाट सुरु भएको रात्रिकालीन सम्पदा यात्रालाई देशका अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने भएको छ। बिहीबार संघीय संसदका दुवै बैठकमा संयुक्तरूपमा बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्। बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना कार्य...
काठमाडौं : सरकारले घुम्ती बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। त्यस्तै, बिमाको दायरा विस्तार गर्ने र दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन बजेटमा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएको छ। नेसनल पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक सेवाको भुक्तानी विद्युतीय...
काठमाडौं : सरकारले नेपालगञ्ज र भैरहवाको सीमा नाकामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी बनाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनीस्थल निर्माण पनि गर्ने भएको छ। त्यस्तै, च...
काठमाडौं : सरकारले नेपालमा पनि किसान क्रेडिट कार्ड सुरु गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। किसान क्रेडिट कार्ड भारतले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ। त्यहाँ राम्रो नतिजा दिएको किसान क्रेडिट कार्ड सर...
काठमाडौं : हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छ। कोरोनाबाट मुक्त हुनेबित्तिकै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने छ। पर्यटन क्षेत्रको अध्ययनको लागि पर्यटन विश्वविद्यालय अध्ययनको तयारी गरिनेछ। माध्यामिक तहभन्दा म...
<< Page2of 355 >>